YSS တံတားအားပေးသောယာဉ်အာမခံ၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုမရောက်ရှိနိုင်ပါ။ RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်သုံးအတွက်တဦးတည်းအားပေးပြီးမှပါရမီ၏ DCH တံတားယာဉ်အာမခံရောက်ရှိမရနိုင်ခြင်း
03 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, hyperlink များ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, TÜDEMSAŞ, တူရကီ 0
yss uctu မှယာဉ်အာမခံပင်တဦးတည်း Struts ရောက်ရှိမရနိုင်ခြင်း
အဆိုပါ Yavuz Sultan Selim တံတားနှင့်အများပြည်သူနှင့်အတူမျှဝေခဲ့သည်သက်ဆိုင်ရာလျှောက်လွှာအားမိမိတုံ့ပြန်မှုအတွက် CHP အစ္စတန်ဘူလ်လက်ထောက်Adıgüzelဂုဏ်ထူးဆောင်သမ္မတအိမ်တော်ဆက်သွယ်ရေးစင်တာ (မြက်) ။ ပခုံး၏နိုင်ငံသားများမှအပျက်အစီး၏ 1 800 တထောင်တန်ဖိုးရှိ Loading တစ်နေ့လျှင်Adıgüzelတံတား DCH သန်းဖြင့်ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရသိရသည်။
ရီပတ်ဘလီကန်ပြည်သူ့ပါတီ (CHP)3ကိုခေါ်လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မှဒုတိယဂုဏ်ထူးဆောင်Adıgüzel "Yavuz Sultan Selim တံတား" ။ ကိုးကားစရာတံတားများအတွက် cimer ထံမှတုံ့ပြန်မှုမျှဝေဖို့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဝေးပြေး၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုထံမှတုံ့ပြန်မှုအဆိုအရအသွင်ကူးပြောင်းရေးနေ့စဉ် 1353တထောင်ယာဉ်များအာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဇွန်လကနေ 2016 စက်တင်ဘာလ 2019 41 သည်အထိကာလသန်း 805 တထောင်မော်တော်ယာဉ်များအတွက်တံတားဖြတ်ကျော်။ ထို့ကြောင့်တစ်နှစ်နီးပါး3များအတွက်ကားထဲတွင်ပေးသောအာမခံချက်၏ပင်လျှင်သုံးပုံတစ်ပုံအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ မရပါ
bianetတဦးတည်းသတင်းအချက်အလက်, Adıgüzelအဆိုအရန်ထမ်းများ၏အမှား မှလွဲ. ထွက်ခွာနေချိန်တွင်တုံ့ပြန်ခြင်းလျှောက်လွှာအတွက်ကုမ္ပဏီမှပေးဆောင်ပမာဏနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများကို "ဟုအဆိုပါကုမ္ပဏီမဆိုအကြောင်းပြချက်တစ်ခုက Business တစ်နှစ်တာအဘို့, အာမခံချက်များအတွက်အပိုင်းသို့မဟုတ်ကဏ္ဍများကွာခြားချက်ဖြစ်ပေါ်တစ်ဦးစုစုပေါင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝင်ငွေရောက်ရန်ပျက်ကွက်ဟုပြောသည် 40.52.34.00- အတွက် 04.5.1.00-2-05.4 coded '' စီးပွားရေး-ဘဏ္ဍာရေးလွှဲပြောင်း '' ဘတ်ဂျက်ကို item ထံမှကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းမှငွေပေးချေထားကြပါတယ် "ဟုအဆိုပါကြေညာချက်ကဆိုသည်။
"30 သည့်အခါအာမခံ ACCESS PERCENT လုပ်"
: အဆိုပါအဖြေကိုသာနှောင်းပိုင်းတွင်Adıgüzelအဆိုပါ 31 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တွင်ပါရှိသောဒေတာကိုအောက်ပါအကဲဖြတ်တွေ့ရှိရကြောင်းဖော်ပြထားသည်အားဖြင့်အာမခံရနိုင် နေ့စဉ်မော်တော်ယာဉ်အာမခံ 135 တထောင်ထဲမှာ "DCH တံတားနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမ။ ဒါပေမယ့်လွန်မှသာ 2016 သန်းတံတား 2019 1033 တထောင်ယာဉ်များစုစုပေါင်းဖုံးအုပ်စက်တင်ဘာလ-ဇွန်လ 41 805 793 နေ့ရက်ကာလ၌။ ကျွန်တော်ပျှမ်းမျှနေ့စဉ် 40 741 တထောင်ယာဉ်များတွက်ချက်ပါလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုမှသာ 30 ရာခိုင်နှုန်းကဒီကာလအတွင်းအာမခံရမည်သိမြင်သောအခါ, ။ "
"နေ့စဉ် 1 800 THOUSAND လူဦးရေသန်း'S Pocket လာ"
ကြောင်းတစ်ဦးတည်း, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 800 တထောင်သန်းနေ့စဉ်အခြေခံAdıgüzelအပေါ်အရှုံး "လအရေအတွက်တုံ့ပြန်ဝင်လာသောအကူးအပြောင်း, နှစ်နှင့်မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားသည်နှင့်အညီမပေးသည့်ကုမ္ပဏီများမှပေးဆောင်ပမာဏနှင့် ပတ်သက်. ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့တွက်ချက်မှုလုပ်နိုင်ခြင်းဖျောပွ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, နေ့စဉ် 135 40 တထောင်တထောင်ယာဉ်များပျမ်းမျှအာမခံတံတားကူးဆင်ခြင်, တထောင်နှုန်းသန်း 95 တထောင်ယာဉ်များ 1 မှပျမ်းမျှနေ့စဉ် 800 အလွန် 82 သန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေ၏အိတ်ကပ်ထဲကနေလာ "ဟု၎င်းကပြောသည်။
"နိုင်ငံသားတံတား BRIDGE အလိုမရှိပါဘူး"
Adıgüzel, အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့တံတားလည်းဝေး DCH တောင်းဆိုမှုကို line ကနေအသွားအလာပြဿနာများနှင့် "တံတား၏ဖြေရှင်းနည်းကိုအထောက်အကူပြုဖို့စောဒကတက်လည်းလမ်းများနှင့်အကူးအပြောင်းတိုးချဲ့၏မြင့်ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်ယာဉ်မောင်းများကပိုမိုနှစ်သက်ဘူး။ DCH တံတားအတွက်အာမခံချက်ပေးပေမယ့်တံတားသူ့ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်အသွားအလာအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှသဘောတူညီချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသည်ကိုရှင်းလင်းစွာအမှား၏အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်တွက်ချက်မှု၏အစအဦး၌ကျွန်တော်တို့ကိုပြသသည်။ တစ်ရက်အာမခံချက်နှုန်း 135 တထောင်ယာဉ်များလက်ရှိအခြေအနေအတွက်ကိန်းဂဏန်းရောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အခြားတစ်ဖက်များနှင့် DCH ကိုလည်းမြို့ပြယာဉ်ကြောဝန်အစ္စတန်ဘူလ်သက်သာစေနိုင်ကြောင်းမိုးသည်းထန်စွာယာဉ်များအစက်အပြောက်သုံးစွဲဖို့အတင်းအကျပ်ဆက်သွယ်သောတံတား၏အထူးသဖြင့်အကူးအပြောင်းအသွားအလာတွင်။ မိုးသည်းထန်စွာယာဉ်များချိတ်ဆက်နှင့် Mahmut Bey အသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့လှည့်ကြောင်းတတိယလက်စွပ်လမ်းလမ်းဆုံသာယိုနှင့်အတူဒေသတွင်းပြောင်းလဲသွားပြီ, ထိုယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုဖြေရှင်းဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
အကျဉ်းချုပ်3၌တည်၏။ တံတားများထိုကဲ့သို့သောအစ္စတန်ဘူလ်ပေးနေတာ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်ဆေးတစ်လက်ပစ္စုပ္ပန်ကိစ္စတွင်ယာဉ်အတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမရနိုငျသောဥပဒေကြမ်းအာမခံချက်၏နိုင်ငံသားများပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်မဖွစျနိုငျပါ "ဟုသူကဆိုသည်။
BursaRay ပြန်အမ်းငွေ system ကိုကဖြစ်နိုင်သမျှမျှတသောစျေးနှုန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့လုပ်မထားပါဘူး 19 / 11 / 2013 BursaRay ပြန်အမ်းငွေစနစ်ကတစ်ဦးမျှတသောစျေးနှုန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖန်ဆင်းမထားပါဘူး: BursaRay ဘူတာရုံအဆိုပါပြန်လာသော devices တွေကိုတာဝန်ခံထားရှိခဲ့ပါသည်။ ကရိယာဤကိစ်စတှငျအဘယ်သူမျှမရှင်းပြပေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားများ device ကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ BursaRay လိုင်းနှောင်းပိုင်းမှ application တစ်ခုတိုးချဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ပြန်လာကြေးမှုစနစ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့မျှတသောစျေးနှုန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့လုပ်လို့မရဘူး။ ဥပမာ: စက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ကျွန်မ BursaRay Esentepe သုံးပြီးတယ်အကြားခြောက်ရက်ပတ်လုံးတစ်ပါတ်အလုပ်လုပ်ခရီးသည်စဉ် Organize ။ နှစ်ခုသာဘူတာပိုင်းတွင်ငါရာခိုင်နှုန်းကိုငါ့ထွက်ခွာသွားငါ 1.75 25 သွား. ဖြစ်ပျက်သည်ကို ထောက်. 1.5 TL ပြန်ရောက်နေပါသည်ခုတ်ဖြတ်။ လိုင်းအရှည်2ကီလိုမီတာ။ ငါနှင့်အတူအတူဘူတာရုံ 15 ကီလိုမီတာအပေါ်ရဖို့ခရီးသည်ထွက်ခွာArabayatağı။ လိုင်း ...
DCH တံတားနှင့်ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အသွားအလာစိတ်သက်သာရာရခဲ့သည် 24 / 02 / 2017 DCH တံတားနှင့်ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအစ္စတန်ဘူလ်အသွားအလာသက်သာရာ: အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, Yavuz Sultan Selim တံတား Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Intercontinental အားဖြင့်ကောက်ယူသည့်အသွားအလာအညွှန်းကိန်းစစ်တမ်းနှင့်တံတားယာဉ်ကြောကိုဖြတ်ကူး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို detect ။ -Yavuz Sultan Selim တံတား, FSM တံတားယာဉ်ကြောမှုနှုန်း 80%, -Avrasy ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, ဇူလိုင်လ 15 30 ရာခိုင်နှုန်းကိုအာဇာနည်နေ့တံတားယာဉ်ကြော% စိတ်သက်သာရာရခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနအင်ဂျင်နီယာများကတီထွင် "ယာဉ်အသွားအလာ Density ညွှန်းကိန်း" သုတေသနအသွားအလာစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Intercontinental ကူးအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူ Yavuz Sultan Selim တံတားပုံစံကို အသုံးပြု. ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဖွင့်ပွဲနှင့်အတူ Fatih Sultan Mehmet တံတား Yavuz Sultan Selim တံတား ...
Gebze-Sabiha Gokcen-DCH တံတား YHT လိုင်း၏လမ်းကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည် 15 / 11 / 2017 Gebze Sabiha Gökçenအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် Yavuz Sultan Selim တံတား YHT လိုင်းကစတင်ခဲ့သည်။ လိုင်းလမ်းကြောင်းစတင် EIA ကို process ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်Ümraniye, Tuzla, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Beykoz, Pendik, Çekmeköyနှင့် Sancaktepe ခရိုင် Aydinli နှင့် Poyraz ရပ်ကွက်ရာထူး, ပြည်နယ်မီးရထားလုပ်ငန်းညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ၏ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန Gebze-Sabiha Gokcen-Yavuz Sultan Selim တံတားများ၏စီစဉ်ထားအကောင်အထည်ဖော်မှုအားဖြင့် မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုက၎င်း၏က start တယ်။ လိုင်း EIA ကို process ကိုစတင်ခဲ့သည်။ Gebze Sabiha Gokcen Yavuz Sultan Selim တံတားမီးရထားလိုင်းဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု4853 700 တထောင်သန်းနှင့်အတူအကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်။ Gebze-Sabiha Gökçenအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မီးရထားလမ်းလမ်းကြောင်း ...
DCH တံတားအပေါင်းအဖေါ်များတရုတ် Comes 29 / 06 / 2018 အီတလီတတိယတံတားမှာသူတို့ရဲ့အစုရှယ်ယာရောင်းနေကြသည်။ Astaldi တံတားကပြောသည်ရောင်းဘို့စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုအဆင့်မြင့်ဇာတ်စင်၌တည်ရှိ၏ Yavuz Sultan Selim ၏3xnumx't ကနေကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အီတလီဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Astaldi ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Paolo Astaldi, သူတို့ကအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်တတိယတံတားရှိ 1 ရာခိုင်နှုန်းကိုရှယ်ယာများရောင်းချခြင်းများအတွက်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ထားတဲ့ခေတ်မီအဆင့်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီများ၏အပါအဝင် Astaldi နှင့် IC ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဦးပိုင်ရဲ့ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အတူ Yavuz Sultan Selim တံတားများတွင်ရှယ်ယာများရောင်းချရန်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြသည်။ တတိယတံတားယခုနှစ် 33 သည်အထိပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍက operated လိမ့်မည်။ ရင်းမြစ်: www.sozcu.com.t
တရုတ်တံတား Partner အီတလီ Astaldi ရဲ့ရှယ်ယာ Talib မှ DCH 04 / 10 / 2018 တံတား Astaldi အတွက်xnumx'lükရာခိုင်နှုန်းကိုရှယ်ယာများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအုပ်စုတစ်စုကဆောငျရှကျ Yavuz Sultan Selim တရုတ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုသတင်းရပ်ကွက်အရသိရသည်အရှိန်သိရသည်။ သတင်းရင်းမြစ်သဘောတူညီချက်ယခုနှစ်အကုန်တွင်အဆိုပါရောမမြို့အခြေစိုက် Astaldi မှာနေရာရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တတိယတံတားအတွက်၎င်း၏ရှယ်ယာများကိုရောင်းဖို့ကြိုးစားနေနှင့်ဝယ်လုပ်ငန်းစုများအတွက်ညှိနှိုင်းမှုပို့ချအပါအဝင်လမ်းများချိတ်ဆက်နေစဉ်အခြားတရုတ်ကုမ္ပဏီ Astaldi အရင်းအမြစ်အရသိရသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးရှိအကြောင်းကို $ 33 ဘီလီယံကိုတံတားရိတ်သိမ်းနှင့်အတူတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အရင်းအမြစ်အုပ်စုအရသိရသည်။ သတင်းရပ်ကွက်အဆိုအရနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်တရုတ်ကုန်သည်များ Group ၏ဦးတည်ချက်အတွက်လေလံဆွဲဖို့မဆုံးဖြတ်စေခြင်းငှါ, သေးအများပြည်သူပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ရရှိသောခဲ့သည်။ အကြွေးဆပ်ဖို့အရင်းအနှီးနှင့်သဘောတူညီချက်များ၏အနာဂတ်တိုးမြှင့်ဖို့ Astaldi ...
ဒုက္ခဂရိတ် Sapanca Ropeway စီမံကိန်း
BursaRay ပြန်အမ်းငွေ system ကိုကဖြစ်နိုင်သမျှမျှတသောစျေးနှုန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့လုပ်မထားပါဘူး
Gebze-Sabiha Gokcen-DCH တံတား YHT လိုင်း၏လမ်းကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်
DCH တံတားအပေါင်းအဖေါ်များတရုတ် Comes
တရုတ်တံတား Partner အီတလီ Astaldi ရဲ့ရှယ်ယာ Talib မှ DCH
လက်ထောက် Gursel Tekin: သူဥမင်လိုဏ်ခေါင်း marmaray işlevlikထဲကပြေးလျှင်ပင် Suburban bitmedikc အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်
Konya-တူရကီ YHT အချိန်ပျက်ကွက်
အဆိုပါ 2011 Kars Project ထဲတွင်တစျခုမှာစွန့်ပစ်နိုင်ဘူးအဆိုပါထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကအခြေခံပုံစံကိုပြင်ဆင်